Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Guam » La kulan Mary Rhodes, geesiga cusub ee Dalxiiska ee Guam, USA
Wararka Ururada • Awards • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Guam • Wareysiyo • News • Ogeysiisyada Saxaafadda • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Hoolka Halyeeyada Dalxiiska Caalamiga ah wuxuu ku furan yahay magacaabis kaliya si loo aqoonsado kuwa muujiyey hoggaan aan caadi ahayn, hal -abuurnimo, iyo ficillo. Geesiyaasha Dalxiiska ayaa qaada talaabada dheeraadka ah.
Maanta geesigii ugu horreeyay ee dalxiiska ee Guam ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay. Dhageyso dooddii dhex martay Hero Mary Rhodes, iyo Guddoomiyaha WTN Juergen Steinmetz.
Mary Rhodes waa madaxweynaha Guam Hotel & Association Restaurant.
Mary Rhodes hadda waa geesi dalxiis, ka dib markii ay magacawday Danielle Arriola oo lagu casuumay inay ku soo biirto Hoolka Caalamiga ah ee Geesiyaasha Dalxiiska by Shabakadda Dalxiiska Adduunka.
Mary Rhodes waxay ahayd Guddoomiyaha Guam Hotel iyo Association Restaurant Association.
Mary Rhodes waxay ka timid Guam, oo ah US Territory 7 saacadood duulimaad ka timid Hawaii, ama 90 daqiiqo Manila. Guam waa halka Ameerika ay ka bilaabato maalinteeda.
Mary Rhodes wuxuu leeyahay,
“Caalamka oo dhan, suuqyada dalxiiska ayaa guud ahaan saameyn ku yeeshay saameynta masiibada. Annaga oo ah hoggaamiyeyaasha warshadaha, waxaan u baahanahay inaan isku dheelitirno amniga iyo caafimaadka bulshada iyo dhaqaalaha annagoo kobcinayna dadaallada waara, adkeysi leh oo ku tartamaya gobolkeenna. ”
“Tallaabooyinka dalxiiska ee horkacaya oo leh xoog iyo karti ayaa ah astaamaha lagama maarmaanka u ah maareynta arrimaha, caqabadaha iyo fursadaha saameynta tooska ah iyo kuwa aan tooska ahayn ku leh meesha aan u soconno, suuqyada ilaha muhiimka ah iyo warshadaha.”
Juergen Steinmetz, oo ah guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko Maryan oo ku soo biirtay hoolkayaga geesiyaasha dalxiiska. Hoggaamiye run ah, oo si weyn gacan uga geystay ilaalinta deriskeenna Badweynta Baasifigga. Isla mar ahaantaana waxay awood u yeelatay inay Guam ku haboonaato goob safar iyo dalxiis. Waa u qalantay! ”
Intii lagu guda jiray 2020 iyo 2021, Marwo Rhodes waxay hormuud u ahayd dhowr hindise intii lagu jiray masiibada si loo hubiyo caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha warshadaha, dadka deggan bulshada, iyo shaqaalaha milatariga ee Guam iyadoo u adeegaysa xiriiriyaha warshadaha dalxiiska dawladaha kormeera, isku -duwaha iyo hoggaaminta barnaamijyada iyo hawlaha soo socda:
Waxay u abaabushay aqoon isweydaarsi masiibo bishii Janaayo 2020 warshadaha dalxiiska oo ay weheliso la -hawlgalayaasha dawladda hoose iyo kuwa federaaliga ah ee ku saabsan qorshaynta degdegga ah, borotokoolka caafimaadka iyo badbaadada, layliyada miisaska, iyo tababarka masiibada.
Marwo Rhodes waxay sidoo kale si dhow ula shaqaysay Waaxda Caafimaadka Dadweynaha iyo Adeegyada Bulshada iyada oo qoreysa tilmaamaha caafimaadka dadweynaha ee hab-raaca caafimaadka iyo badbaadada ee Covid-19 ee warshadaha dalxiiska;
Waxay ka soo shaqeysay xarunta hawlgallada degdegga ah Guam Homeland Security iyo Deparment of Public Health iyo Adeegyada Bulshada 15-kii sano ee la soo dhaafay (gaar ahaan intii lagu jiray masiibada Covid-19 ee 2020 iyo 2021) si ay u matasho waaxda gaarka loo leeyahay oo ay u noqoto xubin RAC oo u hoggaamiya laba kooxood oo ESF ah daryeel ballaaran iyo hoy iyo meel.
Marwo Rhodes ayaa gargaar bixisay intii ay socotey masiibada rakaabka imanaya hoy iyo gaadiid;
Waxay u adeegtay sidii qandaraaslaha iibiyaha ugu horreeya ee karantiilinta, hoyga, iyo adeegyada USS Roosevelt laga bilaabo Maarso illaa Luulyo 2020, oo u baahan maaraynta adeegyada leh 12 hoteel oo xubin ka ah GHRA si loo daryeelo loona ilaaliyo in ka badan 5,000 oo shaqaale iyo haween ah dowladda federaalka iyo ciidamada.
Marwo Rhodes waxay ahayd maamulaha qandaraaska iibiyaha ugu weyn ee Wasaaradda Gaashaandhigga;
Waxay hoggaaminaysay dhowr xarumood oo tallaal iyo goobo imtixaan oo goobta shaqada loogu talogalay shaqaalaha waaxda gaarka loo leeyahay si loo hubiyo in tallaalka Guam uu gaaro xasaanadda xoolaha ee boqolkiiba 80 ama ka badan. Iyada oo ah Madaxweynaha GHRA, Marwo Rhodes waxay si dhow ula shaqaysay Waaxda Caafimaadka Dadweynaha & Adeegyada Bulshada si loo sugo tallaalada iyo tijaabooyinka shaqaalaha warshadaha dalxiiska.
Marwo Rhodes ayaa sidoo kale hormuud u ahayd isku -duwidda adeegyada rugta iyo isbitaalka si ay u maamusho barnaamijyada goobaha loo -shaqeeyaha;
Marwo Rhodes waxay gacan ka geysatay dib -u -furidda warshadaha dalxiiska iyada oo Xafiiska Booqdayaasha Guam ku yeeshay saddex mashruuc oo muhiim ah:
(1) shaqaalaha warshadaha tallaala si loo hubiyo in ganacsatadu leeyihiin heer tallaal oo sarreeya,
(3) kor u qaad oo horumari barnaamij tallaal iyo fasax oo loogu talogalay waayeelkii hore ee Mareykanka iyo shaqsiyaadka ka yimid suuqyada ilaha muhiimka ah ee aan helin tallaalka Covid-19 waxayna u safri doonaan Guam si ay u tallaalaan.
Tani waxay u baahan tahay joogitaan gaaban ama waqti dheer taas oo ku xidhan saddexda tallaal ee ay doortaan in la maamulo: Jansen & Johnson, Moderna, ama Pfizer. Dhammaantood waxay leeyihiin borotokoollo adag oo qayb ka ah barnaamijka;
Marwo Rhodes iyo GHRA waxay hormuud u ahaayeen dhawr qaybood oo tababar iyo aqoon isweydaarsi ah Maamulka Ganacsiga Yaryar (SBA) iyo Xarunta Horumarinta Ganacsiga Yaryar si loo baro waaxda gaarka loo leeyahay barnaamijyada kala duwan ee federaaliga ah ee ka faa'iideysta ganacsiyada inta lagu jiro aafada.
Tusaale ahaan, PPP, EIDL, iyo Sanduuqa Dib -u -noolaynta Maqaaxida oo malaayiin doollar ka helay kaalmada dawladda dhexe iyada oo loo marayo deeqo iyo deyn.
Waxay soo saartay dhowr tababar iyo fursado wacyigelin bulsheed oo ay ka mid yihiin Madal Dhaqaale, siminaaro, iyo aqoon isweydaarsiyo si loogu hawlgeliyo loo-shaqeeyayaasha arrimo kala duwan oo la xiriira Covid-19 oo ay ka mid yihiin kaalmada shaqo la’aanta faafa, maalgelinta federaalka, tallaalada goobta shaqada, caddeynta tallaallada, hab-raaca caafimaadka iyo amniga , iwm.
Marwo Rhodes dadaalkeeda GHRA waxaa iska kaashaday Society for Human Resource Management iyo dhowr NGO. Waxaa ku jira rugaha kala duwan ee ganacsiga ee Guam.
Marwo Rhodes waxay u adeegtay laba kooxood oo ka shaqeeya iyo guddiyada la -talinta ee hoos yimaada Guddoomiyaha Guam, Maamulka Horumarinta Dhaqaalaha Guam, Xafiiska Booqdaha Guam, iyo Waaxda Shaqada ee Guam oo matalaya mid ka mid ah dhowr urur oo soo kabashada dhaqaalaha, kaalmada shaqo la'aanta dadweynaha, deeqaha ganacsiyada yaryar , tababar, iyo aqoon isweydaarsiyo
[emailka waa la ilaaliyay] | http://www.ghra.org
Mr. Daniel Pimental wuxuu leeyahay,
September 23, 2021 at 09: 50
Faafida si loo hubiyo caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha warshadaha, deganeyaasha bulshada, iyo shaqaalaha milatariga ee Guam inta ay u adeegayaan xiriiriyaha warshadaha dalxiiska iyada oo dowladda hoose iyo tan federaalkuba ay kormeerayaan, xiriirinayaan oo hoggaaminayaan barnaamijyada iyo waxqabadyada soo socda. Runtii waan jeclahay qoraalkan. Waa maqaal aad u war badan. Waad ku mahadsan tahay tan.